Uya kumangaliswa zizinto ezininzi eziphazamisa umntu kwiphepha abafike kulo. Amaqhosha, ukuhambahamba, imifanekiso, amanqaku ebhulethi, amagama abhalwe ngesandla… zonke zithatha ingqalelo yotyelelo. Ngelixa iluncedo xa usenza ukuba iphepha lisetyenziswe kwaye ubeka ngabom izinto ezo ukuze zilandelwe lundwendwe, ukongeza into engalunganga okanye izinto ezingaphandle zinokuthatha undwendwe kude nefowuni-yokwenza ofuna ukuba bacofe kuyo kwaye uguqule uvule.
Into yokuqala esiyenzayo kuhambo yimephu yemvelaphi kunye nendawo esiya kuyo, emva koko sinike eyona ndlela isebenzayo phakathi. Xa u ukwenza imephu kwiphepha lakho lokufikaNdiyathemba ukuba wenza kwa into enye - ucinga ukuba zivela phi iindwendwe zakho kwaye ungashiyi mbuzo wokuba yintoni indawo ekuyiwa kuyo Apha zi 9 iimpazamo eziqhelekileyo unokwenza xa usenza iphepha lokufika (kodwa kufuneka uphephe):